Sarkaal katirsan maamulka gobolka Banaadir oo lagu dilay Muqdishu
MUQDISHU, Somalia - Kooxo hubaysan ayaa saaka barqadii ku dilay magaalada Muqdishu, Sarkaal katirsanaa maamulka gobolka Banaadir, oo lagu magacaabi jiray Cabdulle Maxamuud Cali.
Dilka Sarkaalkan oo ay geysteen Rag bastoolado ku hubaysan, ayaa ka dhacay Isgoyska Sanca, ee degmada Kaaraan.
Labo dhalinyaro ah ayaa ku toogtey Cabdulle xilli uu ku sugnaa Makhaayad ku yaalla Isgoyska Sanca, kadibna goobta ayay ka baxsadeen, sida ay Goobjoogiyaal u xaqiijiyeen Warqabadka Warsidaha Garowe Online ee Muqdishu.
Allah ha u naxariistee Marxuum Cabdulle wuxuu ahaa Gudoomiye waaxeed katirsan maamulka degmada Kaaraan, mana wadan wax Ilaalo ah xilliga la dilayay. Ciidamada Booliska degmada ayaa goobta gaarey durbadiiba, oo sameeyay Howlgal aan cidna lagu soo qaban.
Ma jirto cid sheegatay Mas'uuliyadda dilka Mas'uulkan, balse kooxda Al shabaab ayaa inta badan ka fulisa Muqdishu iyo magaalooyinka kale ee dalka dilalka beegsiga ah, ee loo geysanayo Shaqaalaha dowladda, Askarta iyo dadka kale oo bulshada muhiimka u ah.
Gaari lagu rasaaseeyay Muqdishu iyo Khasaaro ka dhashay [AKHRI]
MUQDISHU, Somalia - Koox hubaysan saarnaa Gaari, ayaa rasaas ku furey Gaari kale, oo ay la socdeen dad shacab ah, xilli uu marayay Xaafadda Suuq Liif ee degmada Dharkeenlay, oo katirsan gobolka Banaadir.
Goob-jooge ayaa u sheegay GO in labo qof ay ...
MUQDISHU: Xildhibaan ka tirsan Aqalka Sare oo dil ka badbaadey
Gollaha Wasiiradda DFS oo ansixiyay Sharicga La Dagaalanka Argagaxisada
Fahfaahin kasoo baxaysa Qarax ka dhacay Muqdishu [Dhageyso]
Somalia: ​Wasiiro diiday Codbixintii go’aanka looga gaarey Kiiska Qalbi Dhagax
Soomaaliya: Jawaari oo kulan gaar ah la yeeshay Madaxda AMISOM 24.03.2018. 23:57
Soomaaliya: Wararkii ugu dambeeyey Mooshinka ka dhanka ah Jawaari 24.03.2018. 21:11
Guddi cusub oo loo magacaabay Weerarkii Guriga Cabdi Qeybdiid [DAAWO] 24.03.2018. 19:00
Qarax ka dhacay Masar iyo wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha 24.03.2018. 16:18
Ciidamo ajnabi ah oo lagu wareejinayo amaanka Xarunta Aqalka Sare [Akhri Sababta] 24.03.2018. 13:47
Soomaaliya: Xiisad ka taagan Balad Xaawo iyo rasaas la maqlay 24.03.2018. 11:31